Dhageyso: Sababta ay soomaalida ugu badan ugu dhimatay cudurka Corona-virus. - NorSom News
Dhageyso: Sababta ay soomaalida ugu badan ugu dhimatay cudurka Corona-virus.
Dalka Sweden waxaa soo baxeyso inay sii kordheyso tirada dadka soomaalida ah ee u dhimaneyso xanuunka Corona-virus, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Waxaana dadka xanuunkan u geeriyooday kamid ah aqoonyahano caan ah iyo odoyaal bulshada soomaalida magac ku dhex lahaa.
Inta la xaqiijiyay ilaa 6 qof oo soomaali ah ayaa xanuunkan u dhimatay, inkasta oo warbaahinta soomaalida qaarkeed ay qoreyso in tiradu ay gaari karto ilaa 13 qof. Iyada oo guud ahaan dalkaas ay xanuunkan u dhinteen 35 qof, gudaha dalka Sweden.
Halkan ka dhageyso wareysi uu mid kamid ah siyaasiyiinta soomaalida ah ee dalkaas siiyay idaacada VOA, isaga oo ka hadlayo sababta soomaalida u badisay xanuunkaas inay u geeriyoodeen.
NB: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix(Subcribe/Abonner).
Previous articleRagga ayaa ugu badan dadka u dhinta xanuunka Corona-virus.
Next articleHey´adda canshuuraha oo dadka uga digeyso khiyaanadan.